Linux Mint 14 Nadia ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Linux Mint 14 Nadia ကို install လုပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
သူတို့အခါတိုင်း ပိုပြီး အ အသုံးပြုသူများသည် ခင်ဗျားသိတဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးမှု ချိုးပါ de Ubuntu ကို နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကိုယူ။ The နောက်ဆုံး ၎င်းတွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်အချို့နှင့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်လာသည် - Cinnamon နှင့် MATE ။
Ubuntu နှင့်မတူသည်မှာ Mint သည် multimedia audio နှင့် video codecs အများစုနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့ကို update လုပ်ခြင်းသည် ဦး စားပေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာလူသိများသော package manager ဖြစ်သည်။
သင့်မှာ Ubuntu-based version ရှိရင် program နှင့် package တော်တော်များများသည်ဖြန့်ဖြူးမှုနှစ်ခုစလုံးအကြားအလွန်သဟဇာတဖြစ်တယ်။
ဤအချက်များကိုရှင်းလင်းပြီးနောက် Nadia ဗားရှင်းအသစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည့်အရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်၍ စာရင်းပြုစုထားသည်။
1 ၁။ Update Manager ကို run ပါ
2 ၂။ ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဒရိုင်ဘာကိုတပ်ဆင်ပါ
3 ၃။ ဘာသာစကားအထုပ်ကိုထည့်ပါ
5 ၅။ တင်းကျပ်သောစာလုံးများတပ်ဆင်ပါ
6 ၆။ ကစားရန်ပရိုဂရမ်များသွင်းပါ
8 Gparted ကို Install လုပ်ပါ
10 cache ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း
၁။ Update Manager ကို run ပါ
ရုပ်ပုံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးချိန် မှစ၍ အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မွမ်းမံမှုမန်နေဂျာ (Menu> Administration> Update Manager) မှသို့မဟုတ်အောက်ပါ command ဖြင့်မရရှိနိုင်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် -
sudo apt-get update && sudo apt-get update ကို
Menu Preferences> အပိုဆောင်း Drivers များရှိကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ဒရိုင်ဘာကို (လိုချင်ပါက) ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Linux Mint သည်စပိန်ဘာသာစကား (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်းဖော်ပြခဲ့သောအခြားမည်သည့်အရာ) ကိုမဆို install လုပ်သော်လည်းလုံးဝလုံးဝမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေကိုပြောင်းရန် Menu> Preferences> Language support သို့ ဝင်၍ terminal မှအောက်ပါ command ကိုရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။
sudo apt-get ကို install-language-pack-gnome-my ဘာသာစကား-pack-en ဘာသာစကား-pack-kde-en libreoffice-l10n-en thunderbird-locale-en thunderbird-locale-en-en thunderbird-locale-en-ar
အဲဒီမှာလုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်! In http://gnome-look.org/ ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမည့်နောက်ခံပုံများ၊ အခင်းအကျင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်အခြားဒြပ်စင်များ၏ကြီးမားသောဒေတာဘေ့စ်ရှိသည်။ လူသိများသောကိရိယာ (၃) ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. သရက်, ငါတို့ရဲ့ desktop အတွက် shortcut bar နှင့် application များ။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki။ တပ်ဆင်ခြင်း - terminal တွင်ရေးသားသည်။ sudo apt-get install docky
2. AWN, အခြားအညွှန်းဘား, docky ဖို့ပြိုင်ဘက်နီးပါး! တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://launchpad.net/awn တပ်ဆင်ခြင်း - ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာမှ။
3. ကွန်ကရစ်, RAM, CPU အသုံးပြုမှု၊ စနစ်အချိန်စသည့်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးသည့် system monitor ။ ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှာဤအပလီကေးရှင်း၏“ အရေခွံများ” များစွာရှိသည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://conky.sourceforge.net/ Installation: sudo apt-get install conky
၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါက terminal တွင်အောက်ပါ command များကိုရေးပါ။
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ ttf-mscorefonts-installer
ကျွန်ုပ်တို့သည် TAB နှင့် ENTER တို့ဖြင့်စီမံခြင်းဖြင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပါသည်။
ဒါကို terminal မှလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ မည်သည့်မန်နေဂျာမှမှမဟုတ်ဘဲသူတို့အသုံးပြုသောစည်းကမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သိုလှောင်ခန်းများရှိသည့်ကြီးမားသောဂိမ်းစာကြည့်တိုက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် http://www.playdeb.net/welcome/.deb packages များရှိ Linux system အတွက်ဂိမ်းများစုဆောင်းရန်အထူးပြုသည့်နောက်စာမျက်နှာတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့လိုပါကစိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။
1. ဝိုင် (http://www.winehq.org/) ဂိမ်းများသာမက Windows စနစ်များအတွက်စုစည်းထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးမျိုးကိုပါလုပ်ဆောင်ရန်လိုက်ဖက်တဲ့အလွှာကိုပေးသည်
2. PlayOnLinux (http://www.playonlinux.com/en/) ၀ င်းဒိုးအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုပေးသည်
3. Lutris (http://lutris.net/) GNU / Linux အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆင့်များ၌ရှိနေသော်လည်းကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
4. Winetrics (http://wiki.winehq.org/winetricks) .NET Frameworks, DirectX စသည့် Linux ပေါ်တွင်ဂိမ်းများလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်စာကြည့်တိုက်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကူညီသည့် script တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ဤပရိုဂရမ်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သက်ဆိုင်ရာတရားဝင်စာမျက်နှာများကို Linux Mint Programs manager သို့မဟုတ် terminal တွင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာကိုဖတ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည် နည်းပြဆရာ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့တပ်ဆင်မည်၊
၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည် Gstreamer သို့မဟုတ် Timidity တို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အပံ့ပုံစံများကိုတိုးချဲ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ နှစ်ခုလုံးကို Programs manager တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ် sudo apt-get install command ကို အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Pulseaudio-equalizer ဆော့ဗ်ဝဲကိုဖော်ပြပြီး Pulse Audio configuration နဲ့အသံအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ ထည့်သွင်းရန် command ၃ ခုကိုအသုံးပြုရမည်။
sudo add-apt-repository ကို ppa: nilarimogard / webupd8
sudo apt-get update ကို
sudo apt-get ကို install လုပ်ပါ
Gparted ကို Install လုပ်ပါ
အချို့သော installation များတွင်ဤအစိတ်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ disk များအခန်းကန့်များကိုစီမံရာတွင်အသုံးတည့်သကဲ့သို့ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြန့်ဖြူးရာတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်စာရိုက်ခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည် sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ်အစီအစဉ်မန်နေဂျာထံမှ။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့လိုအပ်တာတစ်ခုစီအတွက်သင်လိုချင်တဲ့ software ကိုရဖို့ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
1. el en Program Manager၊ ကျွန်ုပ်တို့ Menu> Administration မှကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်လာသည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုအလွန်ရက်ရောသောပရိုဂရမ်များရှိသည်။ မန်နေဂျာကိုအမျိုးအစားအလိုက်စီစဉ်ပေးတယ်၊ အဲဒါကငါတို့လိုချင်တာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပရိုဂရမ်ကိုတွေ့ရှိပါကထည့်သွင်းရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Administrator စကားဝှက်ကိုသာရေးသည်။ မန်နေဂျာတ ဦး မှတဆင့်လုပ်ဆောင်မည့် installation တန်းကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်။
2. ယင်းနှင့်အတူ အထုပ်မန်နေဂျာ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်လိုသော pack ကိုကျွန်ုပ်တို့အတိအကျသိလျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့် package အားလုံးကိုမသိလျှင်ပရိုဂရမ်များကိုခြစ်ရာများမှတပ်ဆင်ရန်အကြံမပြုပါ။
3. တစ်ဦးခြင်းအားဖြင့် ဂိတ် (Menu> Accessories) နှင့်များသောအားဖြင့် sudo apt-get install + program name ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် sudo apt-get ppa: + repository name နှင့်အတူအရင်တုန်းက repository ကိုထည့်ရမည်။ console ပါသော program တစ်ခုကိုရှာဖွေရန် apt search ကိုရိုက်နိုင်သည်။
4. စာမျက်နှာပေါ်တွင် http://www.getdeb.net/welcome/ (Playdeb ၏အစ်မ) .deb packages များတွင်စုစည်းထားသော software ကောင်းတစ်ခုရှိသည်
5. မှ တရားဝင်စီမံကိန်းစာမျက်နှာ အခြားမည်သည့်တပ်ဆင်မှုအဆင့်များရှိပါက။
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera - အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများ
Mozilla Thunderbird: အီးမေးလ်နဲ့ပြက္ခဒိန်မန်နေဂျာ
Libre ရုံး၊ Open Office၊ K-Office: ရုံးသုံးအစုံ
Okular - ဖိုင်စာဖတ်သူ (pdf အပါအ ၀ င်)
Inkscape: vector ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာ
VLC, Mplayer - အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်
Rythmbox၊ Audacious, Songbird, Amarok - အသံဖွင့်စက်များ
caliber: e- စာအုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု
Picasa - ပုံစီမံခန့်ခွဲမှု
Audacity, LMMS: အသံတည်းဖြတ်ရေးပလက်ဖောင်းများ
Pidgin, Emesené, Empathy: multiprotocol chat clients များ
Google Earth - Google ရဲ့လူသိများတဲ့ virtual globu
ဂီယာ၊ Vuze: P2P ဖောက်သည်များ
Bluefish: HTML တည်းဖြတ်သူ
Geany, Eclipse, Emacs, Gambas - ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပတ်ဝန်းကျင်
Gwibber, Tweetdeck: လူမှုကွန်ယက်များအတွက်ဖောက်သည်များ
K3B, Brasero: disc recorder များ
Furious ISO Mount: ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင် ISO ပုံရိပ်များတပ်ဆင်ရန်
Unetbootin - သင်သည် operating system များကို pendrive တွင်“ mount” ခွင့်ပြုသည်
ManDVD, Devede: ဒီဗီဒီထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း
Bleachbit - မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုစနစ်မှဖယ်ရှားပါ
VirtualBox, Wine, Dosemu, Vmware, Bochs, PearPC, ARPS, Win4Linux: လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ဆော့ဝဲလ်ကိုအတုခိုးခြင်း
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစာရင်းကိုကြည့်ရန်သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် Programs အပိုင်း ဒီဘလော့ဂ်
၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏မှတ်ဉာဏ်ကိုရှင်းလင်းလိုပါက terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးအောက်ပါတို့ကိုရေးပါ။ su - (root ဖြစ်ရန်) ထို့နောက် 3> / proc / sys / vm / drop_caches ပဲ့တင်ထပ်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖျက်စွမ်းအားမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအခြားကိုးကားချက်များကိုဖတ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ http://linux-mm.org/Drop_Caches
ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်သုံးရန်အဆင်သင့်ရှိပြီးသား operating system ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်မန်နေဂျာများ၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခြားကိရိယာများကိုလေ့လာရန်အမြဲတမ်းလိုလိုပင်။
တိုတိုပြောရရင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြေလျော့ပေးပါ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ အပြာရောင်ဖန်သားပြင်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောကန့်သတ်ချက်များမရှိခြင်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းချက်ချင်းလေ့လာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux Mint 14 Nadia ကို install လုပ်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
57 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဟိုဆေး Salvador Toral ဟုသူကပြောသည်
ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ linux mint 14 xfce ရှိပါသလား။ ဒါပေမယ့်ပြproblemနာက၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားအသံမပေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်မှာ linux mint 13 xfce မပေါ်မီနှင့်အသံသွေးခုန်နှုန်းဖြင့်အသံချဲ့စက်ကိုကျွန်တော်အသံချဲ့စက်မပါဘဲပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့အခြားတွေမဟုတ်ပေမယ့်ဒီရွေးစရာ option ကလာတာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဘာအသံမှမပေးဘူး၊
Jose Salvador Toral အားစာပြန်ပါ
Monocot Zea Mays ဟုသူကပြောသည်
ဒီ Linux ပစ္စည်းကကျွန်တော့်ကိုတစ်ဝက်လောက်ကုန်ကျသော်လည်း Linux ကိုဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားပရိုဂရမ်ကိုကျွန်တော်မထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ (ပျောက်ဆုံးနေသော n ကို preferences manager မှလည်းထည့်ပြီးပြီ) တစ်ယောက်ယောက်ကပေးနိုင်သည် အကြံဥာဏ်အချို့? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Monocot Zea Mays အားစာပြန်ပါ
Kurumu Kurono ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးသည်ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးကိုမူရင်း ၁၂ ရက်အရရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မူရင်းလမ်းညွှန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Copypaste ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်။ ငါသည်လည်းစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ရမည်။
Kurumu Kurono အားပြန်ပြောပါ
မီလ်တန် Hernan ပို ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ LinuxMint ထည့်သွင်းပြီး dual-boot မျက်နှာပြင်ကိုမည်သို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရမည်နည်း။ ငါဒီမှာတွေ့ရတဲ့စုစုပေါင်းနောက်လိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုမကူညီခဲ့ဘူး။
Milton Hernán More သို့ပြန်သွားပါ
၎င်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများကျယ်ပြန့်သော burg ကိုတပ်ဆင်ပါ
sudo apt-get burg-common burg-themes အားသွင်းခြင်း burg-themes-common burg-emu burg-pc
အချို့သောအက္ခရာများမှာ q, «a»« z »« # 1 »« Esc »« Tab »« Cap Locks »စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမတွေ့ရပါ။
ငါ့အမှု၌အခြားသောစပိန်ဘာသာစကားကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ခုကိုကြိုးစား။ လေ့လာခဲ့သည်
ငါ ubuntu linux အစိမ်းရောင်မိတ္တူ XD နှင့်အတူနေ၏
Paolo ငြိမ်းချမ်းရေး ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ muxo ကူညီ… Windwos 8 ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့် linux mint14 =) ကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။
Paolo Paz အားပြန်ပြောပါ
Gilberto Pizarro ။ ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသစ်ဖြစ်ကတည်းကကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကို MS-DOS နေ့ရက်တွေကိုအမှတ်ရစေခဲ့တယ်။ ဆော့ဗ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကကျွန်ုပ်ကိုမိသားစုကြီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်သူ) အဖြစ်ခံစားစေခဲ့သည်။
Gilberto Pizarro အားပြန်ပြောပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ စာမျက်နှာကိုမဖွင့်နိုင်ပါ http://www.youtube.com Firefox browser မှာ insternet မရှိတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော့်ကိုခုန်ပေါက်သွားတယ်။ ငါ့မှာ linux mint 14 ရှိတယ်၊ ဒါကို plugins တွေကို update လုပ်ပြီး install လုပ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးစရာကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကနေရာလွတ်၊ အခန်းကန့်ကိုရှာပြီးရှာဖွေမှာမဟုတ်ဘူး။ က
၎င်းကိုသင် (သယ်ဆောင်နိုင်သလား) ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြောင်းပြproblemနာဈ
ငါ (လက်စွဲ partition ကိုအတူ) က install လုပ်။ , ချက်ချင်းသို့ပွေးလေ၏သည်အထိတင်ပြခဲ့သည်
နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ဘာသာစကားအစီအစဉ် (စပိန်ဘာသာ) ကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဖြစ်ရပ်များတွင်ကန ဦး ချိန်ညှိချက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီး / သို့မဟုတ်အသက်သွင်းသည်…… ..
JeremyY Pomp ဟုသူကပြောသည်
ငါ xde နှင့် gnome environment ကို download လုပ်နိုင်မလားသိချင်တယ်။ ဒီ version က kde ပါလာတာလား။ ဒါမှမဟုတ်ငါ xfce ပါတဲ့ version ကို download လုပ်ရမလား။ ငါ KDE မကြိုက်ဘူးဘာလို့ငါပြော
JeremiY Pompa အားစာပြန်ပါ
Fixed the n ။ ဘာအမှားလုပ်မိလဲ
ဘာသာစကား pack ကိုမထည့်သွင်းနိုင်တဲ့အကူအညီလိုပါတယ်
ကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါက၊ မည်သည့်အသံမှမဖွင့်ပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား
~ / .config / ubuntuone / syncdaemon.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပါ
လိုင်းကိုရှာပါ။ files_sync_enabled = မှားသည်
files_sync_enabled = စစ်မှန်သောဖြင့်အစားထိုးပါ
ပြောင်းလဲမှုများကိုသိမ်းဆည်းပြီး UbuntuOne control panel ကိုပြန်လည်ဖွင့်သည်။ အမှု၌သာအလုပ်လုပ်လျှင်ပြန်လည်စတင်ပါ။
nicorobin 120 ဟုသူကပြောသည်
Terminal မှာ root သို့မဟုတ် root ထဲကစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။
nicorobin120 ကို Reply
Rodrigo gomez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအားတစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကူညီပေးလိုပါသည်။
၎င်းသည်တပ်ဆင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် Windows7နှင့်အတူထည့်သွင်းရန်ရွေးစရာကိုရွေးလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် netbook (EXO mate X352) ကိုဖွင့်သောအခါမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ငါ့ကို mintest လုပ်ဖို့ ၂ Memtest နဲ့နည်းလမ်း ၂ ခုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Grub တွင် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရန်၎င်းကိုမည်သို့ကိုယ်တိုင်ထည့်နိုင်မည်နည်း။ Mint တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်မည်သည့်ဖိုင်မှဤစနစ်မှဖိုင်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုကြောင်းသတိပြုမိသည်။
Rodrigo Gomez အားပြန်ပြောပါ
terminal တွင် sudo update-grub2 ရှိပြီး၎င်းသည် windows များရှိရမည့်နေရာနှင့်၎င်းကိုဖွင့်သည်။ linux mint 14
Montevideano ၁ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Status bar မှမီနူးပုံနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ပုံဆွဲပုံတို့ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ MENU အရေးအသားဖြင့်အိုင်ကွန်ကိုထပ်ထည့်။ မရပါ။ ငါ window ကို minimize လုပ်တဲ့အခါမှာ status bar မှာမနေပါဘူးဒါပေမယ့်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကသိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jairo mejia ဟုသူကပြောသည်
သင်အော်ရီကိုမီနူးတွင်တွေ့ရသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်သင်အော်ရီထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သိပ်မများသော်လည်းသင်ကအရာအားလုံးဖြင့်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးရမည်၊ ထိုတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မူလအစ၏ရွေးချယ်စရာကိုသင်ထပ်မံ Drivers သို့မဟုတ် အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်း။
ပုံမှန်အားဖြင့် nVidia နှင့် AMD ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှဖန်တီးထားသောအရာများရှိသည်။ သင်သည်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ပြီးကြောင်းပြောသောပထမနေရာတွင် Apply Changes (Creo xD) သို့မဟုတ် Apply Changes ဟုပြောပြီး၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စောင့်နေသည်။ ပြန်လည်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီးသင့်ကဒ်၏အမည်ကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ပေါ်မနေကိုတွေ့ရပါမည်။ ပြသနာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ဦး အားမေးမြန်းပါ။ (Noob)
Jairo Mejia အားပြန်ပြောပါ
Foxmulder ၇၉ ဟုသူကပြောသည်
Compa ကကျွန်တော့်ကိုအပြည့်အဝအစေခံခဲ့ပြီး Linux Mint 14 ကိုစွန့်ခွာပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်အလွန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည့်အတွက် Ubuntu 12.04 ထက်ပိုပြီးကြိုက်ခဲ့သည်။ VLC မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပါမည်🙂
Ainus Solheim ဟုသူကပြောသည်
Language pack ကို install လုပ်ရန် command တွင် typo ပါရှိသည်။ n တွင်ပျောက်ဆုံးနေသည်
laguage-pack-gnome-es၊ အဲဒါဟာဘာသာစကား -pac-gnome-es ပါ
Ainus Solheim ကိုစာပြန်ပါ
ကြီးမြတ်သောသင်၏အလှူငွေ !! ဒါကငါ့ကိုအများကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်! (AND)
အီး: အချို့သောအညွှန်းဖိုင်များဒေါင်းလုပ်မအောင်မြင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လျစ်လျူရှုခံထားရပြီးသို့မဟုတ်ဟောင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်
Danniel navas ဟုသူကပြောသည်
အပိုဒရိုင်ဘာများတပ်ဆင်ရန်ရှိလျှင်သူတို့ကဆော့ဝဲရင်းမြစ်ကိုသွားပြီးနောက်ဆုံး tab တွင်ပေါ်လာသည်
Danniel Navas အားစာပြန်ပါ
Mint 14 တွင်၊ Preferences တွင်၊ “ နောက်ထပ်ယာဉ်မောင်းများ” ဆိုသောအပိုင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် Ubuntu 12.10 ၌ရှိသကဲ့သို့ Xorg ပြforနာအတွက် 2xxx-4xxx စီးရီးများ၏ AMD Radeon HD နှင့်သင်သတိထားရမည်။ http://infografia-libre.blogspot.com.es/2012/12/como-instalar-el-driver-privativo-amd.html
အားလုံးအကြံပြုထားသောအစီအစဉ်များနှင့်အတူကောင်းသော။ ငါ၌တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် UbuntuOne ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ငါနည်းလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ၊ ဖွင့်လို့မရဘူး အကယ်၍ ၎င်းကို terminal မှ run လျှင်၎င်းသည်ဖွင့်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား "IPC Error" (ပုံပူးတွဲ) ကိုပြသည်။
ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ။ ငါ repositories ကနေနှင့်လည်း ppa ကနေ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဘာမျှမ။ ငါ hahaha ပြိုကျတော့မယ်…🙁အကြံပြုချက်များ?
Marcelo Andres GonzálezDíaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ Mate နှင့်အတူသစ်ကြံပိုးမရ, ဒါပေမယ့် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" အောက်ရှိ menu ကိုကြည့်အိုင်ကွန်အသံသို့မဟုတ်အသံကဒ်ကဲ့သို့!
Marcelo Andres GonzálezDíazအားပြန်ပြောပါ
မင်းရဲ့ repositories မှာပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​သူတို့အမှားအယွင်းတွေရှိပေမယ့်ဖိုင်တွေရှိတဲ့ဆာဗာပေါ်မှာတော့ငါလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုစတင် install လုပ်ပြီးသော်လည်းအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သင်မပြီးဆုံးပါကသင် repositories တွင်အမှားတစ်ခုရှိကြောင်းသတိရပါ။
Terminal မှဖောင့်များကိုတပ်ဆင်လိုသောအခါကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်လိုသည်၊ မလုပ်သည်ကိုမေးမြန်းသောအခါ Aborted ကပြောကြားသည်။
ဖြေရှင်းရန်အကြံပြုချက်များ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
(Linux Mint Hyper ပန်ကာ) hehe
သငျသညျကောင်းစွာတစ်ခုလုံးကို command ကိုကူးယူကြသေချာအောင်! ဒါဟာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ကြောင့်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့!
ငါ "နောက်ထပ်ယာဉ်မောင်း" ကို Cinnamon မှာရှာမတွေ့ဘူး။ သူတို့ဘယ်မှာလဲသိလား။
ဘာသာစကား pack ကိုဖွင့်ရန် command ထဲတွင်ပျောက်နေသော n ကိုထည့်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/thunderbird/thunderbird-locale-es-es_17.0+build2-0ubuntu0.12.10.1_all.deb 404 မတွေ့ပါ [IP: 91.189.92.200 80]
E: ဖိုင်အချို့မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် apt-get update ကို run သင့်သည်သို့မဟုတ် –fix-missing?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအသစ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် linux mint 15 ကိုအသုံးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်အောက်ပါပြhaveနာရှိသည်။ ငါ terminal ကို update လုပ်ရန်သို့မဟုတ် download လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းငါ့ကိုအမှားဖြစ်စေသည်:
စာရင်းစာရင်းကိုဖတ်နေသည် ... မှားနေသည်
W: GPG အမှား - http://archive.canonical.com raring ထုတ်ပြန်ချက် - အောက်ပါကုမ္ပဏီများသည်မမှန်ကန်ပါ။ BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu မော်ကွန်းတိုက်အလိုအလျောက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းသော့ချက်
W: GPG အမှား - http://archive.ubuntu.com raring ထုတ်ပြန်ချက် - အောက်ပါကုမ္ပဏီများသည်မမှန်ကန်ပါ။ BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu မော်ကွန်းတိုက်အလိုအလျောက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းသော့ချက်
E: Package - ခေါင်းစဉ်မရှိသောအပိုင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်
အီး: MergeList နှင့်ပြProbleနာ /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_raring_restricted_i18n_Translation-en
အီး: အထုပ်စာရင်းများသို့မဟုတ် status ကိုဖိုင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့မဟုတ်မဖွင့်နိုင်ပါ။
ငါဘာမှမ download နိုင်ဘူး
အားလုံးကောင်းကောင်းနေပေမယ့်အဓိကပြproblemနာကတော့ hard drive မှာ install လုပ်ထားတာပါပဲ
linux mint 14 နှင့်ကျွန်ုပ်အင်တာနက် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့အခြားတစ်ခုရှာရန်ငါစစရမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Charles menchero ဟုသူကပြောသည်
ငါ linux mint 14 nadia ကိုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့လို့အင်တာနက်ကိုမသုံးနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ရှာဖွေခဲ့တယ်
ကွဲပြားခြားနားသောတိမ်းညွတ်နေရာများနှင့်ငါကံကောင်းပါစေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်မွေးဖွားခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်ထင်သည်)
ငါ package ကိုစတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်တုန်းကပေါ့
ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရေးမကြီးဘူး၊ ဆက်လုပ်ဖို့ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးရင်ငါလုပ်ခဲ့တယ်
ငါအင်တာနက်ထဲမဝင်နိုင်ဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှအကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့အခါငါကငါထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စနစ်အသစ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်အကူအညီတောင်းသည့်အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုမှဤစာကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်။
Operating LINUX MINT 14 NADIA ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
charles menchero အားပြန်ပြောပါ
man ဒီသည်လွန်ခဲ့သော2နှစ်က xD မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ၊ သင်အမြဲတမ်းဖိုရမ်၌ရှိသင့်သည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့ပင် http://foro.desdelinux.net/
Manuel de la Fuentes ဟုသူကပြောသည်
Linux Mint 14 သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ မေလတွင်ထောက်ပံ့မှုအဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မည်။ မင်း 17 ကိုလျှော့ချရမယ်။
Manuel de la Fuente သို့စာပြန်ပါ
ငါရှိသည်ပြtheနာနှင့်ပတ်သက်။ မှတ်စုတစ်ခုချန်ထားပါ။ ငါ့မှာအင်တာနက်မရှိတာကလွဲရင်ဘာကောင်းလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး
ဒါပေမယ့်ပြtheနာကမင်းကိုကူညီတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကပါ။ ဒီပြproblemနာရှိနေပေမယ့် Linux Mint 14 Nadia ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ငါအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိနေချိန်မှာငါသွားမယ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဒါကငါ့မှာရှိတဲ့အသံ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်။ ငါကရေးနိုင်ပါတယ်, ငါသာအင်တာနက်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချားလ်စ် 08/14/14 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
menchero shawls ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Linux Mint 17 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲချ (ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ) ပါ။ အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုကူးယူရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏ disk ပေါ်မှာ ၁၄ ခုရှိလျှင်၎င်းကို download လုပ်ပါကကျွန်ုပ်တွင်အထောက်အပံ့ရှိမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ရှိပါမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ချက်များမဟုတ်ပါ။
ငါ operating system ကိုငါ့ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ရုန်းကန်အတော်လေးအချိန်ဖြုန်းကြောင်းကိုနားလည်ပါသည်
ပြီးတော့မင်းရဲ့ပူးပေါင်းမှုအနည်းငယ်နဲ့ငါလိုချင်တာကိုရနိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, တုံ့ပြန်မှုချားလ်စ် 08/14/14 စောင့်ဆိုင်း
chaeles menchero အားပြန်ပြောပါ
ချားလ်စ် MENCHERO ဟုသူကပြောသည်
mr «ရင်းမြစ်များ»မှရရှိသောအဖြေသည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျေနပ်အားရမှုမရှိဟုထင်ရပါသည်။
သူ linux mint သည်အသုံးမ ၀ င်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်မကြိုးစားကြောင်းပြောခဲ့သည်မှာသူသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အေးလွန်းသောအသံဖြင့်ဘာမျှရှင်းပြရန်မရပ်တန့်ဘဲ Linux ၁၇ သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။
SR LEFEVRE ဘာလုပ်ရမလဲငါဘယ်နေရာကိုငါပြန်သွားပါသို့မဟုတ်သင်ကူညီလိမ့်မည်ကိုငါရွေးချယ်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါတောင်းသမျှ IS အင်တာနက်ကိုဝင်ရန်လိုအပ်သည်။
CHARLES MENCHERO သို့ပြန်ပြောပါ
Dell 1133 ပရင်တာ၏ Mint အတွက်ဒရိုင်ဘာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်နိုင်သည်ကိုမည်သူမဆိုသိရှိပါသလား။
ဗွီဒီယိုများကိုနှောင့်နှေးစေသည်ဟုကျွန်ုပ်မြင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ laptop သည်နည်းနည်းဟောင်းသွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း ???? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
JUANMA MERIDA သို့ပြန်ပြောပါ
သငျသညျ VLC သို့မဟုတ် Mplayer ကိုအသုံးပြု။ ကြိုးစားခဲ့သလား
ဒါကနည်းနည်းအရင်းအမြစ်များရှိပါသလား ??? သင့်အဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးပါ။ 🙂
ကျွန်ုပ်၏ Dell 1133 လေဆာဘက်စုံသုံးပရင်တာကိုကျွန်ုပ်၏ Linux Mint တွင်တပ်ဆင်ချင်ပါသည်။
ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းနှင့်အဖြေ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မေးမြန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် FromLinux ကိုမေးပါ သင့်ရဲ့ပြproblemနာကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကကူညီနိုင်အောင်။
တစ် ဦး ကပွေ့ဖက်, ပါပလော။
Krita ဖြင့် Konqi အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ
သတ်မှတ်ချက်များ: "Desktop environments" နှင့် "Window manager" ။